Ireto misy toro-hevitra LinkedIn 33 ho anao mba Tweet! | Martech Zone
Tsy dia be loatra ny andro izay tsy mamaky fanavaozam-baovao avy amin'ny LinkedIn, mifandray amin'ny olona iray ao amin'ny LinkedIn, mandray anjara amin'ny vondrona iray ao amin'ny LinkedIn, na mampiroborobo ny atiny sy ny orinasa ato amin'ny LinkedIn. LinkedIn dia làlan-tokana ho an'ny orinasako - ary faly aho tamin'ny fanavaozana nataoko tamin'ny kaonty premium tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ireto misy toro-hevitra mahafinaritra avy amin'ny mpitarika haino aman-jery sosialy sy ny mpampiasa LinkedIn manerana ny tranonkala. Aza hadino ny mizara ny toro-hevitra ary araho ny olona nanome vaovao tsara toy izany!
Ireo mpanentana sy mpandahateny ampahibemaso dia mila mitazona ny mombamomba an'i LinkedIn manaitra mba hiantohana ny fahafaha-miteny ary hananganana fitokisana amin'ny mpihaino. Ireo toro-hevitra LinkedIn 33 etsy ambany dia nofintinina amin'ny tarehin-tsoratra 140 na latsaka, izay manamora ny hafainganana amin'ny alàlan'ny toro-hevitra ary miroso amin'ny lahasa lehibe ho mavitrika ao amin'ny fiarahamonina LinkedIn. Leslie Belknap
Nanampy ireo bitsika ireo izahay mba hahafahanao manao tsotra Click amin'izy ireo handefa azy ireo tweet!
Bitsika: Alohan'ny fampisehoana dia havaozy ny piraofilin'ny LinkedIn; ny mpanatrika dia hamerina handinika izany mba hanombanana ny fahamendrehanao. @ Ethos3
Bitsika: ovao ny rohy mahazatra amin'ny tranokalanao ho fiantsoana andraikitra, indrindra amin'ny mombamomba ny orinasa. @EntMagazine
Bitsika: Mamorona fidirana isaky ny anjara asanao ao anatin'ny lohatenin'ny asa tsirairay. Tsy maninona ny manana daty mifanindry. @Forbes
Bitsika: Mizarà fampahalalana avo lenta amin'ny tambajotrao mba hamoronana fifandraisana izay lasa fiaraha-miasa. @ReidHoffman
Bitsika: Ny halava mety indrindra amin'ny paositra lava endrika LinkedIn dia teny 500 hatramin'ny 1,200. Ny halavan'ny fanoritana ho an'ny mpihaino anao. @SmallBizTrends
Bitsika: Atsipazo ny dingana "Ahoana no ahalalanao an'io olona io". Tsindrio "Connect" avy amin'ny valin'ny fikarohana fa tsy profil. @SylvanLane
Bitsika: Te hahita mpampiasa anao na orinasa hafa hahita ny fanavaozana ny status LinkedIn? Mampiasà @mentions rehefa mandefa. @HubSpot
Bitsika: Aza atao wallflower. Ny mombamomba anao dia 5x azo inoana kokoa raha jerena raha miditra sy mihetsiketsika ao anaty vondrona ianao. @LinkedIn
Bitsika: Rehefa mampahafantatra ny tenanao ianao dia aza mihevi-tena ho irery. Malala-tanana, tena izy ary mifantoha amin'ilay olona hafa. @EmmieMartin
Tweet: Mitady asa vaovao ao amin'ny LinkedIn ianao? Aza avela fantatry ny lehibenao; vonoy ny fampielezana ny hetsika nataonao. @CareerOutcomes
Bitsika: Ireo mpampiasa LinkedIn izay manavao ny mombamomba azy ireo matetika dia mahazo tolotra asa betsaka kokoa noho ny namana izay mifandray amin'ireo mpikarama. @RimDey
Bitsika: sivana ny tenanao. Raha tsy hiteny izany amin'ny resadresaka momba ny asa ianao dia aza atao ao anaty vondrona LinkedIn, na apetraho. @TechRepublic
Bitsika: Fotoana fandaharam-potoana hiasana amin'ny LinkedIn. Avereno jerena ny piraofilinao, araho maso ireo fanavaozana, mandraisa anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra. @ABAesq
Bitsika: Tafiditra ao amin'ny Evernote sy LinkedIn; mandrindra karatra fandraharahana, mombamomba ny LinkedIn, ary fanamarihana tambajotra amin'ny toerana iray. @Evernote
Bitsika: Ampiasao ny mombamomba anao LinkedIn ho toy ny fitaovana fivarotana. Manampia horonan-tsary fohy momba ny orinasanao amin'ny mombamomba anao. @Salesforce
Bitsika: Ampio lanjany ny vondrona LinkedIn: zarao ny fampisehoana an-tsary hahaliana ny mpikamban'ny vondrona. @JayBaer
Bitsika: Ireo mombamomba ny sary dia 14x no heverina hojerena. Mampiasà sary matihanina manana fiaviana tsy miandany. @LinkedIn
Bitsika: Sorohy ireo buzzwords momba ny profil, toy ny: mamorona, ary misy antony. Ahenao kely ny mpamaritra anarana. Hamafiso ireo matoanteny. @BusinessInsider
Bitsika: Aza mampiasa ny hafatra fanasana mandeha ho azy: “Te hanampy anao amin'ny tambajotra matihaniko ao amin'ny LinkedIn aho.” @DailyMuse
Tweet: ”Hitan'ny LinkedIn fa ny lahatsoratra 20 isam-bolana dia afaka manampy anao hahatratra ny 60 isan-jaton'ny mpihaino tokana anao.” @Buffer
Bitsika: Ny fotoana mety indrindra handefasana amin'ny LinkedIn: talata sy alakamisy, eo anelanelan'ny 7 maraina sy 9 maraina ora eo an-toerana. @SocialMediaWeek
Bitsika: ny fanavaozana ny orinasa miaraka amin'ny sary dia manana taha ambony 98% ambony noho ny fanavaozana tsy misy sary. @LinkedIn
Bitsika: Sintomy ny rindrambaiko Connected LinkedIn; natao hanamorana ny fivelaran'ny fifandraisana matihanina. @Jillianiles
Bitsika: Tsy manam-paharoa ianao. Porofoy izany. Mampiasà lohateny famoronana fa tsy manadino ny lohatenin'ny asa misy anao izao. @MarketingSherpa
Bitsika: Ampio ireo mpikarama, vinavina ary mpiara-miasa mety hahita anao; mampiasa teny lakile mandritra ny mombamomba anao LinkedIn. @USnews
Bitsika: Ny atin'ny LinkedIn mahomby matetika dia manome fitadiavana vonona hampiasa amin'ny endrika lisitra. @AndreyGidaspov
Bitsika: Araho ny fitarihan'i Dan Pink; namerina namerina namaky lahatsoratra iray “torohevitra 3 ho an'ny mpandahateny TED” ho an'ny sehatry ny famoahana LinkedIn izy. @DanielPink
Bitsika: ankatoavy ny olona hajainao. Mandefasa hafatra fisaorana rehefa misy manohana anao. @JeffBullas
Bitsika: Tanisao ny zavatra niainan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny LinkedIn; 42% ny mpitantana fandraisana mpiasa dia manome lanja azy io toy ny traikefa amin'ny asa ofisialy. @LinkedIn
Tweet: ”Ny vondrona LinkedIn dia manome ny iray amin'ireo fotoana tsara indrindra marika manokana anananao amin'ny media sosialy.” @Forbes
Bitsika: Mitolona mba hamenoana andraikitra amin'ny orinasanao? Aza manakarama mpandray mpiasa iray, midira ao amin'ny serivisy Recruiter LinkedIn. @NYtimes
Bitsika: Mizarà atiny am-boalohany; “Ny atiny dia zahana enina heny mihoatra ny hetsika mifandraika amin'ny asa ao amin'ny LinkedIn.” @JasonMillerCA
Bitsika: Mampiasà sary; ampidiro ao amin'ny piraofilinao sy ireo lahatsoratra lava-lava ny fampisehoana sy ny sary infografika. @SMExaminer
Tags: andrey gidaspovbuffermpandraharaha ara-barotradailymusedaniel mavokelyemmie martinEthos3EvernoteForbeshubspotJason millerJay BaerJeff Bullasjillian ilesLinkedInvondrona linkedinfampisehoana linkinprofil linkintoro-hevitra linkinmarketing sherpaMarketingSherpanew york timesReid hoffmanrim deysalesforceMpandinika ara-media sosialyherinandro media sosialysyriana lane
Ny refy 3 amin'ny famoronana votoaty